Igbo, John: Lesson 084 - Iwu ọhụrụ maka ụka (Jọn 13:33-35) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 084 (The new commandment)
3. Iwu ọhụrụ maka ụka (Jọn 13:33-35)
33 Ụmụntakịrị, m ga-anọnyere gị obere oge. Unu gāchọm, dika M'siri ndi-Ju, Ebe Mu onwem nāla, unu apughi ibia: n'ihi nka ka M'gwara unu.
Mgbe e mechara ka Nna anyị dị ebube na Mmụọ Nsọ, Jizọs na-eduzi anyị site n'akụkụ na ndabere nke okwukwe anyị. Ọ bụghị naanị anyị n'anụ ahụ, ma ọ dị n'eluigwe. Kraịst ahụ bilitere n'ọnwụ bụ eziokwu kachasị mkpa n'ụwa. Onye na-amaghi Onye di ndu ma obu ikwere na Ya bu onye kpuru ìsì ma gbafuo, ma onye huru ya ga-adi ndu wee nweta ndu ebighebi.
Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ọ ga-aga ebe ndị na-eso ụzọ apụghị iso. Ọ bụghị ikpe ya n'ihu Council, ma ọ bụ ili na-emeghe, ma ọ na-ezo aka ya rịgoro n'eluigwe. Nna-ayi siri, Nọdu n'aka-nrim, rue mb͕e M'gēme ka ndi-iro-Gi guzosie ike. Jisos esighi n'ebe ndi ozo nọ gbafuo ya ma gwa ha tupu ya agaa n 'onwu ya na nbilite ya na nelu igwe ya ebe madu obula puru itinye site ngbali ya. O buru amụma banyere ndị Juu ma ha apụghị ịghọta. Ndị na-eso ụzọ ugbu a hà nwere ike ịghọta n'oge awa nke ịrara mmadụ nye? O meela ha ka ha soro n'ife ofufe nke Nna na Ọkpara ka ha wee ghara iju mmiri na iru uju. Hà ga-atụkwasị obi n'eziokwu ya, na ọ gaghị ahapụ ha? Na na ọrụ ha ọ bụla agaghị ada ada?
34 Ihe enyere n'iwu ka M'nēnye unu, ka unu hurita ibe-unu n'anya, dika M'huru unu n'anya; ka unu we hu ibe-unu n'anya. 35 Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ọ bụrụ na unu ahụrịta ibe unu n'anya."
Jizọs maara na ndị na-eso ụzọ ya agaghị aghọtacha ya ebe ọ bụ na a wụpụghị Mmụọ Nsọ. Ha kpuru ìsì n'enwegh ike inwe ntukwasi obi, ha enweghi kwa ihe ha choro ihun'anya, "n'ihi na Chineke bu ihu-n'anya, onye na nọgide kwa nime ihu-n'anya na digide nime Chineke na Chineke nime ya". Atọ n'Ime Otu bụ ịhụnanya. Ebe ọ bụ na ịhụnanya dị n'etiti ndị nke Atọ n'Ime Otu dị nsọ na-eme ka ịdị n'otu na-adịgide adịgide, Jizọs chọrọ ka ụkpụrụ ahụ na-eme ka Atọ n'Ime Otu dị n'otu ghọọ mmadụ, ka isi iyi nke ịdị nsọ ghọọkwa ndị na-eso ụzọ ya.
Ya mere, Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume maka inwe ịhụnanya n'etiti ndị òtù Chọọchị ya. Ọ kwadoghị ihe iri dị ka ọ dị na Agba Ochie, kama ọ bụ naanị otu iwu nke na-ekpuchi iwu nile nke Chineke. Ịhụnanya bụ mmezu nke Iwu ahụ. Ebe Mozis nyere iwu ndị na-adịghị mma, Kraịst na-akpali anyị ime ihe dị mma ka o gosipụtara onwe ya. Ịhụnanya bụ ihe dị mkpa na ndụ Church. Ebe Chọọchị na-egosi ịhụnanya, ọ kwụsịrị ịbụ Chọọchị.
Ịhụnanya bụ ihe nzuzo nke Onye Kraịst. O nwere ọmịiko n'ebe atụrụ nke na-akpagharị dị ka onye ọzụzụ atụrụ ', wee meere atụrụ ahụ ebere ebere. Ọ mụụrụ ndị na-eso ụzọ ya ndidi na nwayọ. Kraist ama ama ima Obio ubon esie. . Onye hụrụ n'anya na-anọgide n'amaghị Jizọs, ma onye na-akpọ asị bụ nke Setan. Ịhụnanya dị obiọma, ọ dịghị ewe iwe. Ọ na-enwe ndidi, na-enwe olileanya na ihe ọ bụla dị mma ọbụna onye iro, dị ka ndịozi na-etinye àgwà ya na Epistles ọtụtụ ugboro. Ịhụnanya Chineke adịghị ada ada; ọ bụ njikọ nke zuru okè.
Maka Chọọchị, ọ dịghị ihe ịrịba ama ọ bụla ma e wezụga ịchụ àjà maka ịhụnanya. Ọ bụrụ na anyị azụ onwe anyị maka ọrụ anyị na-aghọ ndị na-eso ụzọ ya. Anyị na-amụta ka Jizọs na-eduzi ihe ịhụnanya pụtara. Anyị na-ebi na mgbaghara ya ma gbaghara ndị ọzọ n'ụzọ obi ụtọ. Ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime mgbakọ na-agbalịsi ike maka ịdị ukwuu, ma ọ bụrụ na mmadụ niile na-aṅụrị ọṅụ n'ihi na Mmụọ nke Kraịst dị n'otu, n'ebe ahụ ka eluigwe na-abịa n'ụwa, Onyenwe anyị dị ndụ na-emekwa ka ụka dị iche iche jupụta na Mmụọ Nsọ.
Gịnị kpatara ịhụnanya bụ naanị ihe ịrịba ama nke na-egosi ọdịiche dị n'etiti Ndị Kraịst?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:30 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)